दु:खद खबर ५४ यात्रु बोकेको बस नहरमा ख स्यो, ३० जनाको श’व निका’लियो.. – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दु:खद खबर ५४ यात्रु बोकेको बस नहरमा ख स्यो, ३० जनाको श’व निका’लियो..
दु:खद खबर ५४ यात्रु बोकेको बस नहरमा ख स्यो, ३० जनाको श’व निका’लियो..
गत मंगलवार विहानै ठूलो दुर्घ टना भएको छ । छभारतको मध्यप्रदेशमा मंगलबार बिहानै भएको दु र्घटनामा अहिले सम्म ३० जनाको नि धन भइसकेको खबर छ । बिहान साढे ७ बजे मध्यप्रदेश रामपुर नैकिन क्षेत्रमा ५४ यात्रु बोकेको बस पुलबाट नहरमा खसेर दुर्घट ना भएको स्रोतले बताएको हो।
परिचित सहर सिधीबाट सतना गइरहे’को बस साइड लगाउने क्रममा पु’लबाट अति नै ठुलो बाणसागर परियोजनाको नहरमा खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यम र समा’चार संस्थाहरुले जनाएका छन्। दुर्घ’टना लगत्तै प्रहरीको टोली पुगेको थियो अनि टोलिले स्थानियको सह’योगमा प्रहरीले ३० शव बाहिर निका’लेको छ । निधन हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
भारतीय समाचार संस्था एएनआइ का अनुसार ले ७ जना यात्रु’हरु पौडिएर सकुशल बाहिर आएको जनाएको छ। पौडिने मध्य चालक पनि एक थिए । स्थानीय जनताा, गोताखोर र सुरक्षा’कर्मीहरुले अहिले घ”टनास्थलमा उद्धा’र गरिरहेका छन्।
भारत सरकारका मध्यप्रदेशका मुख्य मन्त्री शिव’राज सिंह चौहानले उ’द्धार कार्यलाई सहज बनाउन नहरको पानि रोक्न अधिकारीहरुलाई आदेश दिइसकेका छन्। अहिले घटनास्थालमा मध्यप्रदेश सर’कारका दुई मन्त्री पनि पुगिस’केका छन्।
३२ जनाको क्षमता’ रहेको बसमा बढी यात्रु राखिएको प्र’हरीले जनाएको छ । सडक जाम भएका कारण रुट परिवर्तन गरेर अप्ठेरो सडकवाट बस लगेका कारण दुर्घ:टना भएको हो । समस्याका कारण मुख्य सडक छोडेर नहरको किनारै किनार बस लैजाँदै गर्दा चालकले सन्तु’लन विगारेका कारण बस नहरमा खसेको हो ।
झाँसी’वसहरबाट बाट रांची जाने राजमार्ग सतना, रीवा, सीधी र सिंगरौली हुँदै जान्छ। यहाँको सड़क खराब र अपूर्ण छ। यस का’रणले, त्यहाँ सडक जाम अत्या’धिक हुने गरेको छ
यीनै हुन आज विहान कोहलपुर’को दु’र्घटना’मा ज्या’न गुमाएका २५ वर्षिय क्रिकेट खेलाडी बिरेन्द्र !
यिनै हुन् छोरा अशोक जसले गरे बाबुको ह’ त्या, कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित !
कोरोनाका कारण दाङमा हृदय विदारक घटना ! छोरीको विवाह नरोकियोस् भनेर आमाले छोराको मृत्यु लुकाइन्
हाँस्यकलाकार रवि डंगोललाई दु:ख दियो कोरोनाले
बल्ल खुल्यो मोदीले देउवा सरकारलाई अहिलेसम्म पनि बधाई नदिनुको रहस्य